Ifulethi eliyi-1BR elinemibhede engu-2 nekhishi, isitezi sesibili - I-Airbnb
Ifulethi eliyi-1BR elinemibhede engu-2 nekhishi, isitezi sesibili
I-basecamp enhle kakhulu yokuhlola i-Rapid City ne-Black Hills!
Sivumela kuphela izinja emakamelweni ethu anobungane ezilwane ezifuywayo. Inja eyodwa imahhala, kodwa okwesibili kungu- $ 25 owengeziwe ngesikhathi esisodwa. Sazise uma une-2.
I-lodge yezimoto endala ivulwe kabusha. Sisanda kuthatha amakamelo amabili asehhotela futhi sahlanganiswa ekamelweni elilodwa elihle lekhishi. Zonke izindlu zokugezela ezintsha, amakhishi, iminyango, amafasitela, isistimu yokukhiya nefenisha. Namanje inama-radiator amadala namayunithi e-AC asodongeni esingakwazanga ukuwathola, kodwa asebenza kahle
I-Soj Vacation Rentals and Flats inikeza amafulethi esimanje, anefenisha ephelele e-Rapid City, SD. Amakamelo ahlanganisa ikhishi elinefriji ephelele, i-microwave, i-cooktop nomshini wokuwasha izitsha. Kuhlanganisa nendawo yokuhlala kanye nekamelo lokulala. Kukhona i-patio etholakalayo yokuphumula nokuzijabulisa kwesivakashi. I-Sojourn itholakala kalula kubahambi abafuna ukuvakashela i-Mt. I-Rushmore, i-Black Hills, ihhashi, i-Custer State Park, i-Sturgis, nokuningi. Le ndlu iyabhema.
4.70 · 148 okushiwo abanye
Inqwaba yezindawo zokudlela ongakhetha kuzo, eduze negrosa. IDowntown ne-Main Street Square iqhele ngamakhilomitha angaba ngu-1.5, inhloko yendlela ye-Skyline Wilderness iyimayela elingu-1, i-West Blvd Historic District iqhele ngamamayela angu-.5, kanjalo nesibhedlela.
Abanikazi basemahhovisi usuku lonke futhi bayakujabulela ukusiza ngemibono neziphakamiso ukuze uthole okuningi ngesikhathi sakho e-Rapid City.